Ndị bịara mmemme ahụ gụnyere ndị dị iche iche e ji okwu ha agba izu n'ihe metụtara ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'okpuru ọchịchị Dunukọfịa, ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ahụ, ndị selitere isi n'otu pati APGA n'okpuru ọchịchị ahụ, ndị enyi na ndị hụrụ ọchịchị gọvanọ Obianọ n'anya.
Obianọ kwukwara na ọchịchị ya na-etinye ọkụ okporo ụzọ n'ime obodo dị iche iche e nwere n'okpuru ọchịchị ahụ, ma sịkwa na obodo niile ahụ eritela uru n'amụma ahụ ọchịchị ya weputara, bụ inye obodo ọbụla nde naịra iri abụọ iji wee họrọ ma rụọ ihe dị ha mkpa. Ọ rịọkwazịrị ndị ahụ ka ha kwàdo ịzọ ọchịchị ya nke ugboro abụọ, ma kwe ha nkwa na ha agaghị akwa arịrị ma ọ bụ mmakwaara, ma ha kwàdo ya, n'ihi na ọ gaghị agharịpụ ha.
N'okwu nke ya, onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwado Dunukọfịa, Njikọka, na Anaọcha n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu etiti, bụ Dọkịnta Dozie Nwankwọ cheteere ndị ahụ na iji hụ na gọvanọ Obianọ chịrị nke ugboro abụọ, na ha ga-enuputa n'igwè ụbọchị ahụ, tụọ akwụkwọ, ma legidesie anya ike ịhụ na mmadụ ọbụla egwughị ojoro na ya bụ nhọpụta.
Na ntụnye nke ha n'otu n'otu, onyeisi oche otu pati APGA n'ala anyị, bụ maazị Victor Oye, na onyeisi otu achụm nta nkwado maka ịhọpụtagharị gọvanọ Willie Obianọ, bụ maazị Victor Umeh mere ka a mara na naanị otu pati APGA bụ otu ụzọ ndị Igbo ga-esi wee nwe nkwuwa okwu n'ala Naịjiria, tinyere na ndị Igbo kwesiri ijikọta onwe ha ọnụ n'otu òtù n'ịgba mbọ ha iji nwere onwe ha, rukwaa oge ha nwetara ihe ha na-achọ n'ala Naịjiria.
Onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwado Dunukọfịa n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ahụ, bụ maazị Lawrence Ezeụdụ gosiputara obi ụtọ ya banyere gọvanọ Obianọ maka ihe niile o megooro ndị okpuru ọchịchị ahụ, ọ kachasị n'ebe o metụtara nchekwa, agụm akwụkwọ, ọnọdụ ahụike, ọrụ ugbo, nakwa ịgbata ọsọ enyemaka nyegara ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na mpaghara ahụ.
Na mbụ n'ozi nnọọ ya, onyeisi oche nchere oge n'okpuru ọchịchị ahụ, bụ maazị Uche Umerie kọwara na site n'etu o sigoro meso ndị Dunukọfịa, na gọvanọ Obianọ egosiputala na ọ hụrụ ha n'anya nke ukwuu, ma sị na ha ga-akwụghachi ha ụgwọ maka nke ahụ site n'ịpụta n'igwè n'abalị iri na asatọ nke ọnwa Nọvemba, ma tụnyere ya akwụkwọ maka ịchị steeti ahụ nke ugboro abụọ, n'ihi na ọ chịrị mma ga-achị ọzọ.
A nọzịrị n'oge ahụ wee nabata ọtụtụ ndị sitere n'otu pati ọzọ wee nubata n'otu pati APGA.